Infinity Warမှာ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ကုန်မလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
Infinity Warမှာ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ကုန်မလဲ
Published: March 18, 20185:51 am Updated: May 13, 20191:24 pm
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Avengers တွေရဲ့ Infinity War ရုပ်ရှင် နမူနာ(Trailer) ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ။ Iron-Man, Captain America, Thor, Spider-Man တို့ကို ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ လုံးဝအလန်းစား ဝတ်စုံအသစ်တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် တွေ့ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ သာမန် Spider-Man မဟုတ်တော့ဘဲ လုံးဝအလန်းစား Iron-Spider အဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။
ရုပ်ရှင် နမူနာ (Trailer)ထဲမှာပါတဲ့ ” I hope they remember you” ဆိုတဲ့ ဗီလိန်ကြီး Thanos ရဲ့ စကားကြောင့် ဒီတိုက်ပွဲမှာ ဘယ်သူများ သေဆုံးမလဲ… Captain လား? Tony( Iron-Man)လား? ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ယောက်လား? ဆိုတာ Avengers ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ကမ္ဘာ့အနှံ့က ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ဧပြီလ ၂၇ မှာ စတင်ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Marvel ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်လိုမျိုး မထင်မှတ်ထားတာတွေ လုပ်ပြမလဲ? ဘာတွေပြောင်းလဲကုန်မလဲ?ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရတော့မှာပါ။ရုံမတင်မီ ကြိူတင်ခန့်မှန်း ခံစား လို့ရအောင် ပါဝင်မယ့် စွမ်းအားရှင်ဇာတ်ကောင်များနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဝတ်စုံသစ်တွေကို ရိုးရာလေးပရိသတ်ကြီးအတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။
Previous Previous post: အိန်ဂျလာ မာကယ် ဂျာမနီ အဓိပတိအဖြစ် ၄ ကြိမ်မြောက် ရွေးချယ်ခံရ
Next Next post: Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့မှာ Recovery Mode ထဲ ဘယ်လိုဝင်မလဲ
Captain Marvel ဇာတ်ကားရဲ့ ဒုတိယမြောက် trailer ကို Marvel က ထုတ်ပြလိုက်
ဒီနေ့ကတော့ Marvel ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေ့ပါပဲ။ မင်းသမီး ဘရီလာဆန် (Brie Larson) က Captain Marvel အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “Captain Marvel” ဇာတ်ကားရဲ့ဒုတိယမြောက် trailer ကို ဒီဇင်ဘာ…
Published: December 4, 20184:39 am Updated: May 21, 20193:07 pm
မင်္ဂလာပါ… စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍက ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ အရင့် အရင်အပတ်တွေကတော့ ဖတ်စရာစာအုပ်တွေညွှန်းပေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုကာလတွေမှာမညွှန်းဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာပါပြီ။ စာအုပ်တွေ ဖတ်ကော ဖတ်ဖြစ်ကြရဲ့လားဗျ … ။ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပဲ စီးမျောနေတတ်တဲ့အချိန်ကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ပြီး စာဖတ်ကျင့်ကိုပြန်မွေးကြစေချင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဖတ်မိသမျှတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာစာအုပ်လေးတွေကို…
Published: June 21, 201911:45 am Updated: 11:47 am
သမီးလေးကို Beauty and the Beast ဇာတ်ကားထဲကပုံစံအတိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်
Disney ကာတွန်းကားတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာသူတိုင်းဟာ အဲဒီဇာတ်ကားတွေထဲက ပုံစံလေးတွေအတိုင်း တစ်ခါလောက်တော့ နေကြည့်ချင်မိကြမှာပါ။ ကြင်နာတတ်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ရော့စီ (Rossi)ဟာ သူ့ရဲ့သမီးလေး နယ်လ်လီ(Nellee)ကို Beauty and the Beast ဇာတ်ကားထဲက ပုံစံလေးတွေအတိုင်း…
Published: February 26, 20188:13 am Updated: May 10, 20193:37 pm